people Nepal » राप्रपाको चुनावी अभियान के-कस्तो छ ? राप्रपाको चुनावी अभियान के-कस्तो छ ? – people Nepal
काठमाडौं, बैशाख २– संसदको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशब्यापी चुनावी अभियान थालेको छ । अञ्चलस्तरीय चुनावी सभा तय गरेको राप्रपाले शनिवार पहिलो दिन बर्दियाको गुलरियामा सभा गर्दैछ । चुनावी सभामा भाग लिन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा नेपालगञ्ज पुगेका छन् ।
शनिबार गुलरियाबाट चुनावी सभा कार्यक्रम शुरु गरी राप्रपाले पूर्वको दमकमा वैशाख ९ गते सभा गर्दैछ । सबै अञ्चलमा चुनावी सभा आयोजना गरेको राप्रपाले आइतबार कैलालीमा, बैशाख ४ गते महेन्द्रनगरमा, ५ गते दाङको तुल्सीपुरमा तथा वैशाख ६ गते चितवनको नारायणघाटमा सभा आयोजना गर्दैछ ।
ओली प्रचार समितिमा
रेडियो नेपालको जागिर छाडेर राजनीतिमा लागेकी गायिका कोमल ओलीलाई राप्रपाले केन्द्रीय प्रचारप्रसार समिति सदस्य बनाएको छ ।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रभावकारी बनाउन पार्टी प्रवक्ता रोशन कार्कीको संयोजकत्वमा बनाइएको ९ सदस्यीय केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिमा ओली पनि अटाएकी हुन् । ओली पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।
प्रचार समितिमा पार्टीका अर्का प्रवक्ता भूवन पाठक, मोहन श्रेष्ठ, किरण गिरी, प्रदीपकुमार उदय, रविन चाम्लिङ, गोपाल पौड्याल र रेशमराज पौडल सदस्य छन् ।
वैशाख ८ मा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने
राप्रपाले बैशाख ८ गते पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने राप्रपाले जनाएको छ ।
राप्रपाले निर्वाचन प्रचारका लागि आम सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न १५ माध्यम र २० वटा चुनावी नारासमेत तय गरेको छ।